Ku dheji server-ka Diiwaanka Firfircoon leh Debian iyo Samba | Laga soo bilaabo Linux
Aasaasida Server Directory Firfircoon leh Debian iyo Samba. Qaybta koowaad
Waxay yihiin Link | | Shabakado / Adeeg
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Koorsooyinkan taxanaha ah waxaan ku barayaa sida loo sameeyo server Tusaha Hawl-galka shabakadaha kombiyuutarada Windows hoose Debian (Haddii aan dhiseyno server, si sax ah ayaan u sameyn doonnaa, xaabada). Qeybtan koowaad waxaan ku sharixi doonaa rakibaadda iyo qaabeynta serverka kan labaadna waxaan ku bari doonaa sida loo isticmaalo qalabka maamulka fog de Windows 7 iyo sida kombiyuutarada loogu daro domainka (Windows 7 laftiisa iyo a Windows XP). Goor dambe ayaan samayn doonaa qayb saddexaad marka laga reebo sida loogu biiro kooxaha GNU / Linux maadaama ay tahay wax aanan weli tijaabin.
Fikradani waxay ii timid aniga oo ah (ama ahaa, waxay kuxirantahay markaad aqriso boostadan) qaadashada koorso shaqo joojinta farsamayaqaanada dayactirka qalabka Microcomputer kaas oo aan ka sameysanay shebekad isku xiran Windows 2008 (ma ahan RC2) waxaanan bilaabay inaan fiiriyo haddii aan isku mid ka hirgelin karo GNU / Linux natiijaduna runtii way fiicantahay, xitaa macalinkaygu wuu layaabay xawaaraha serverka.
Kahor intaadan sii wadin, oo sida xaqiiqada ah inbadan oo idinka kamid ah ayaa isweydiiya, Waa maxay Diiwaanka Firfircoon? Hagaag, waa ereyga ay Microsoft adeegsato si loogu tixraaco qalabkeeda maamul ee shabakada sida serverka DNS, maamulka adeegsadayaasha shabakadaha, iwm.
Waxaan u baahan doonaa waxyaabaha soo socda:
Debian laanteeda xasilloon (kiiskeyga Wheezy 7.5 oo leh XFCE oo ah bii'ad desktop ah)
Macaamiil leh Windows 7 / 8 / 8.1 oo leh xirmada si loo rakibo shaqooyinka xakamaynta serverka fog (oo loo baahan yahay si loo maareeyo serverka, sida la wadaag faylka isticmaaleyaasha). Tan waxaa lagu sharxi doonaa casharka xiga.
0.1 Dejinta adeegaha
1 iyo sida loo kiciyo. Macluumaad intaas ka badan, kafiiri boggaga (5).
2 Isku xirka shabakada loopback
3 Isku xirka shabakada aasaasiga ah
3.1 Ku rakibidda Samba 4
Kahor intaadan sii wadin, waa inaan wax ka bedelno feylasha qaar si wax walboo u shaqeeyaan, gaar ahaan si kumbiyuutarada shabakadu u helaan server-ka.
Waxa ugu horreeya waa in la siiyo cinwaankeenna cinwaan IP go'an. Xaaladda tijaabintaydii Debian-ka ee Waalidka Isticmaal Isgaadhsiinta, taas oo ah waxa ka yimaada saldhigga, laakiin server-ka dhabta ah ayaan ka sameeyaa Maareeyaha shabakadda, sidaa darteed waxaan ku sharixi doonaa sida loo sameeyo labadaba.
Faylka ugu horeeya ee aan tafatiri doono ayaa ah / Iwm / network / interfaces.
iyo sida loo kiciyo. Macluumaad intaas ka badan, kafiiri boggaga (5).
Isku xirka shabakada loopback
Isku xirka shabakada aasaasiga ah
cinwaanka: IP-ga kooxdeena.
shaashadda: maaskaro shabakadda. Shabakad yar ama guri badanaa waa tan.
albaab: irridda. Caadi ahaan waa IP-ka router-ka ee na siiya ka bixitaanka internetka.
dns-magacyada: Server ip DNS. Xaaladdan oo kale serverka, laakiin waad ku dari kartaa ilbiriqsi, tusaale ahaan dadweynaha Google.
2da ugu dambeysa waxay muujinayaan magaca raadinta domainka iyo magaca domain laftiisa.
Hadda waa inaan ku darnaa khadadka soo socda / iwm / martigaliyayaasha:
Tan, magaca domain ayaa lagu xallin doonaa si looga helo shabakadda. Matrix waa magaca aan u bixiyay serverka.
Ugu dambeyntiina waan tafatirnaa /etc/resolv.conf:
Casharrada qaarkood waxaan ka helay, waxay ku dareen khad kale oo magac-uyaal ah iyo dhowr is-beddello badan, laakiin xaaladdayda kaliya hal khad ayaa igu filan.
Hadda waxaan dib u bilaabaynaa adeegga shabakadda waana taas:
Guji batoonka midig ee midigta kumbuyuutareedka kadibna xulo Tafatir iskuxirka. Waxaan heli doonnaa shabakadaha aan qaabeynay, laakiin waxaan kaliya xiiseyneynaa wicitaanka Shabakada fiilooyinka 1 ama wixii aad magacowdayba. Waxaan ku labanlaabaynaa daaqad cusubna way soo muuqan doontaa waana tagi doonaa Dejinta IPv4. in habka waxaan xulnaa Buugga. Hada dhagsii Kudar oo buuxi dhammaan beeraha:
Hadda waxaan tagnaa tabta General waana hubinnaa in la calaamadeeyay Dhamaan isticmaaleyaashu waa inay ku xirmaan shabakadan. Guji Badbaadi waana ka tagnay.
Ku rakibidda Samba 4
Kiiskeenna waxaan dooneynaa inaan kala soo baxno oo aan ka soo ururinno Samba 4 boggeeda maxaa yeelay Debian waxaa kaliya looga heli karaa keydka. Warqadaha waxayna i siisay dhibaatooyin ku tiirsanaan.
Waxaan u soconaa http://samba.org si aad u soo dejiso nooca ugu dambeeya ee xasilloon ugana furfuro xirmada galka.
Nooca ugu dambeeyay ee xasilloon waqtiga qorista maqaalkani waa 4.1.8 markaa waxay noqon doontaa midda aan la shaqeyno.
Si loo soo ururiyo waxaan u baahanahay inaan soo dhigno xirmooyinka soo socda:
Markaad soo dejiso oo aad furfurto, waxaan fureynaa terminal waxaan u dhaqaaqeynaa galka waxaanan fulineynaa amarradan soo socda:
Rakibaadda caadiga ah ayaa ku jirta / usr / local / samba. Inta ay taageerto cabbirka –prefix = / usr MAYA wuxuu ku rakibaa buuggaagyada u dhigma (tusaale ahaan binaries ma geliyaan / usr / bin)
Hadda waxaan ku darnaa dariiqyada cusub ee PATH. Xaaladdayda ku jirta /etc/bash.bashrc si aad u dalbato dhammaan isticmaaleyaasha, oo ay ku jiraan xididka.
Oo waxaan sidoo kale u abuureynaa xiriir gudaha / iwm Samba si loo helo feylka qaabeynta:
Waxaan dooneynaa inaan qaabeyno server-ka Samba. Tani waxaan u fulineynaa:
–Realm waa magaca domain oo buuxa.
–Domain: waa domain. Waa inuu ku jiraa xaruufta waa wayn
–Adminspass: waa ereyga sirta ah ee maareeyaha shabakada.
–Use-rfc2307: si aad u dhaqaajiso AC.
Haddii wax waliba si fiican u socdaan wax yar ka dib Samba ayaa dhammayn doonta iskeed isu qaabeynaysa. Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan xulashooyinka suurtogalka ah, kaliya ordo:
Hadda waxaan dooneynaa inaan wax ka bedelno feylka /etc/samba/smb.conf. Hada maxaa ina daneynaya waa xariiqda soo socota:
Khadkani waa inuu tilmaamaa server-ka DNS ee na siiya marin u helka internetka (xaaladdan, router-ka). Samba waxay qaadataa qaabeynta shabakada caadiga ah laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad xaqiijiso.
Hadda waxaan bilaabaynaa adeegga:
waxaanan hubinaa iskuxirka anagoo fulinayna:
Hadday wax waliba sax yihiin waxaan arki doonnaa wax la mid ah tan:
Haddii ay na siiso cilad xiriir, waxaan xaqiijineynaa tallaabooyinka barta hore. Diiwaanka Samba wuxuu ku yaal /usr/local/samba/var/log.samba
Hadda waxaan nuqul ka qaadaneynaa feylka /usr/local/samba/private/krb5.conf a / iwm. Hadda waxaan hubinaynaa inaan isku xirmi karno:
Ojo, domainka waa in la weyneeyaa.
Kadibna waxay na weydiin doontaa lambarka sirta isticmaalaha (kiiskan, maamulka) iyo haddii aan helno fariin la mid ah «Digniin: Furaha sirta ahi wuxuu dhacayaa 40 maalmood gudahood Isniinta Jul 14 13:57:10 2014» waa inay si sax ah u soo baxday.
Oo ilaa hadda qaybta koowaad ee casharka. Waxaan ka aqrinay kuwa soo socda.
Horey ayaan uga faallooday dhowr jeer faallooyinka, laakiin halkan ayaan dhigay. Sababtoo ah xaqiiqda ah inaanan hadda haysan ilaha lagama maarmaanka ah (Kaliya waxaan haystaa kombuyuutarka guriga tanina waa la rakibay inta lagu guda jiro koorsada) iyo in lagu sameeyo mashiinnada farsamada waa dhib, macquul maahan inaan sii wado. Haddii qof aqoon leh oo kooxdu rabto inay sii wado tan, way u furan yihiin inay sidaa sameeyaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Aasaasida Server Directory Firfircoon leh Debian iyo Samba. Qaybta koowaad
Aad u xiiso badan, marwalba waxaan doonayay inaan ogaado sida tan loo sameeyay.
Suurtagal ma tahay in la sameeyo iyadoo la isticmaalayo SSH halkii laga isticmaali lahaa Samba?
Waan fahamsanahay inay ka dhakhso badan tahay oo ammaan tahay.
Waa inaan baaritaan ku sameeyaa.
SAAXIIB. MA IIGA SHAQEYSAA HABKA TALAABO-TALLAABO SI AAD UGU SAMEEYSID IN AAD INTERNETKA KA SOO GASHO ADEEGA SIDA UU WINDOWS XP UU SAMEEYO NIDAAMKA KOOBARKA KOOBARKA EE LAYNX QAABKA SHAQEYNTA IYO VISEVERSA EE LA LEEYAHAY LINUX SER Ilaa EE WINDOWS.
Sawirka meeleynta Claudio Concepcion dijo
Gacaliye Lolo, taasi waa wax aan macquul ahayn, maadaama SSH ay u oggolaaneyso kalfadhi (iyo waxyaabo kale, sida wareejinta feylasha iyo codsiyada) illaa barta u dhexeysa kumbuyuutarrada leh GNU Linux. Halka Samba maxay ka dhigan tahay beddelka GNU Linux ee nidaamka Tilmaamaha Firfircoon ee Microsoft.
Son Link waxa uu sameeyay waa maamule domain ka ah GNU Linux.
Ku jawaab Claudio Concepcion
Tuto aad ufiican. Way ku fiican tahay dadka aniga oo kale ah oo nooca cagaaran ku saabsan. Aad baad u mahadsantahay
Mahadsanid! Hanuun fiican. Ansixi…
Mahadsanid saaxiib, hagahaagu waa mid aad u wanaagsan.Waxaan rajaynayaa qaybta labaad, habka aad u sameysay ma ka dhigtay inaad ku shaqeyso ldap?
Aad u xiiso badan, waxaan sugayaa sii wadida. Mahadsanid. ^ _ ^
PS: Waxaan u maleynayaa inuu jiro qalad yar oo qoraal ah oo kujira qaabeynta / iwm / shabakad / isku xirnaanta, waxay dhahdaa dns-domian markay ii muuqato inay tahay in dns-domain la tago.
La saxay. Waad ku mahadsantahay digniinta ^^
Waxaan ka helay maqaalkan mid aad u xiiso badan. Maaddaama oo kaliya aan kujiro howsha barashada aqoon badana aanan ugu laheyn arintan waxaanan rabaa in aan waxbadan ka barto maareynta iyo maamulka nidaamyada howlgalka.
Ku jawaab wilson ruiz
Taasi faa'iido ma u leedahay samaynta faylal wadaag ah oo Debian ah mise waxay u socotaa casharro kale oo dhinacaas ah?
Waxaa jira qeybinta Linux oo la yiraahdo Resara Server oo ku saleysan Ubuntu oo loo isticmaalo si gaar ah dhisida kontorool domain, waan isku dayay waana mid aad u fudud in la isticmaalo, waxaan awooday inaan ku biiro kombuyuutarrada qeybtaas serverka, waxaan halkaan uga tagayaa habka , laga yaabee inuu qof isticmaali doono - http://ostechnix.wordpress.com/2012/12/31/resara-server-an-alternative-opensource-linux-domain-controller-for-windows-active-directory-controller/
Oh !!! Weyn, waxtarka maalinta .. Mahadsanid 😉
Soo dhawoow! 😀
Waad ku mahadsantahay wadaagista. Kadib waan fiiriyaa
Waad ku mahadsantahay wadaagistaada !!!
Jawaab ku sii The_Mastersok
Cashar wanaagsan, waxaan sugi doonaa inta hartay. Waxaan xasuustaa markaan PDF ku rakibey Debian 6 oo leh samba 3 iyo ldap. Way shaqeysay laakiin waa inaan u adeegsadaa tusaalooyinka .pol si aan wax uga beddelo awaamiirta. Xaaladdan oo kale, sidee loo maamulaa siyaasadahaas?
Siyaasadaha isticmaalaha iyo kooxda waa in laga sameeyaa macmiil Windows 7/8 / 8.1 ah oo wata xirmo kontoroolka fog. Waa wax aan ku sharixi doono qaybta xigta. Waxaan eegay bal inaan arko haddii ay jirto wado aan ku sameeyo iyada oo aanan u baahnayn, laakiin waxba kamaan helin oo Samba wiki waxay leedahay sidan oo kale, ugu yaraan kumbuyuutarrada Windows, laakiin waan sii wadi doonaa , sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay qaadan doonto wax yar in la soo raro qaybta soo socota.
Macluumaad aad u fiican ... Waad ku mahadsan tahay tan ...
Aad u fiican…. Aad ayaan u xiiseynayaa tan ……. waa goorma qeybta labaad ??? ama hadaad buug u hayso arintan iigu soo hagaaji emayl ... fadlan !!!! mahadsanid
Hagaag, usbuuca oo dhan, laakiin si sax ah kuuma sheegi karin goorta, tan iyo inta udhaxeysa fasalada iyo mashruuca aan ka shaqeynayo, mashquul ayaan ahay.
Cashar bixin heer sare ah….
Waxaan rajeynayaa maalin uun inaan ku dhaqmo ..
Salaan kadib waxaan sugay qeybta labaad !!!!
Runtu waxay tahay inaan tan sameeyay hal mar, laakiin kumaan galin wax kasta ... waxaan rabaa inaan kugula taliyo / adiga qalab, ma ogi inaad ogtahay iyo inkale, ma aqaano xaddidaadkiisa, laakiin inaan ku xirnaado Server Directory Active wax dhib ah kuma qabin, waxaan ku tijaabiyey kulleejo sifiican ayeyna u shaqeysay. Barnaamijka waxaa loogu yeeraa Sidoo kale, wuxuu la mid yahay waxkastoo aad Samba ku qabatay, wax kale oo aadan ka badnayn ma habeyn, waa wax la soo koobay, dabcan waad wax ka beddeli kartaa waxaad u baahan tahay oo aad jeceshahay 🙂
Waxaan rajeyneyaa inay tani ku caawin karto! Farxad
Maqaal aad u xiiso badan, waxaan sugi doonaa qeybta labaad. Waxay ahayd layaab weyn in la barto in ay macquul tahay in lala macaamilo tusaha "casriga ah" ee firfircoon ee Gnu / Linux, waxaan xasuustaa in aan ku sameeyay wakhti dheer ka hor NT 4 nooca diiwaanka firfircoon waxayna ahayd niyad jab weyn in aan la dayan karin waa markii Microsoft ay bedeshay "qaabdhismeedka" LDAP-kaaga ee Windows 2000 Server.
Salaan ka timid Ecuador =]
Salaan. Aad baad u mahadsantahay!
Waxaan hayaa dhowr su'aalood ... maxay dhab ahaan u tahay buugga firfircoon?
Dhinaca kale, ma bari kartaa, haddii aad awooddo, sida loo xisaabiyo waxa isticmaalayaashu sameeyaan?
I for audior ayaa hirgeliyay tan: http://chicheblog.wordpress.com/2011/01/21/como-auditar-la-actividad-de-los-usuarios-en-samba/
Laakiin haddii aad sii ballaadhin karto, ama aad ku dari karto wax aad taqaanno, waa la mahadiyey!
Habeen wanaagsan, Salaan ka timid Peru.
Waxaan hayaa weydiin waxyar ka duwanaanaysa wax kasta oo la daabacay, eeg si aan wax yar u sharraxo, eeg waxaan u habeeyay galkaan faylka /etc/samba/smb.conf
faallo = Fayl khaas ah
waddo = / guri / Gaar loo leeyahay
aqri kaliya = haa
browseable = haa
martida ok = maya
dadweyne = maya
qor liiska = @comercial, @ cunno
isticmaaleyaal ansax ah = @comercial, @ cunno
sameyso maaskaro = 0777
maaskaro diiwaanka = 0777
Hadda weydiintaydu way socotaa, wax walbana si fiican ayey u shaqeeyaan laakiin markii aan ka imaado kombuyuutarka waxaan la soo galayaa isticmaaleha «pepe» ka tirsan kooxda «comercial» iyo kombiyuutar kale waxaan la soo galayaa isticmaalaha «coco» ka tirsan kooxda «gestion», kuwan soo socdaa waxay dhacayaan markaan fayl ama fayl ka abuuro isticmaalaha «pepe» waxaanan doonayaa inaan tirtiro tusahan ama feylka laga abuuray kombuyuutarka kale ee isticmaalaha "coco" wuxuu ii sheegayaa inaanan samayn karin sababtoo ah ma haysto mudnaanta, laakiin qoraaga qudhiisu wuu tirtiri karaa faylkan ama buugga, waad gaadhay.
Faylka khaaska ah waxaa laga abuuray qaabka soo socda:
chmod -R 777 / guri / Gaar loo leeyahay
Waxay ku shaqeeyaan isla shabakad LAN ah.
Waxaan isticmaalaa Server Distro Ubuntu 14.xx
Waa in la ogaadaa in waxa aan doonayo ay tahay in galkaan gaarka ah ay maamusho 2 ama in ka badan oo isticmaaleyaal ah halkaas oo leh fikrad ah la shaqeynta Kooxo laakiin waxay umuuqataa inay jiraan wax iga maqan ama aan ka tagayo, waxaan rajaynayaa dareenkaaga oo waxaan dhegta u taaganahay faallooyinkaaga.
Saaxiib waad ku guuleysan kartaa adiga oo ka saaraya koomayaasha
qor liiska = @comercial @gestion
isticmaaleyaal ansax ah = @comercial @gestion
Ku jawaab Thesaint
Waad salaaman tahay gacaliye,
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qaybta labaad ee koorsadu wali sugantahay, waxaan rajaynayaa faallooyinkaaga waana ku mahadsantahay.
Jawaab Raúl Baca Centeno
Waa hagaag, laga yaabee inaysan ahayn tan iyo markii aan si dhib yar u aqaan aasaaska si aan u sameeyo oo ay horeyba ii weydiiyeen su'aalo aanan jawaab u hayn, marka waxaan arkaa inay ugu fiican tahay inaanan samayn qaybtaas labaad, maadaama, si daacadnimo ah, inaan qayb kale ula sameeyo aqoon yar, oo aan lahayn qalabka lagama maarmaanka ah (Kaliya waxaan haystaa kombuyuutarkeyga oo aan ku sameeyo Mashiinnada Virtual-ka waa adag tahay oo badanaa ma tuuraan markii ugu horreysay)
Runtii waan ka xumahay arrintan, laakiin aragtidayda, waa tan ugu wanaagsan. Haddii qof kale lagu dhiirrigeliyo inuu sameeyo qaybtaas labaad maxaa yeelay aqoon buu leeyahay, way u madax bannaan yihiin inay sameeyaan
Galab wanaagsan, maanta oo kale ayaan aqriyay dhammaan faallooyinka waxaanan hayaa mashiin nus habeysan, sababtaan awgeed waxaan ogaaday inaadan daabici doonin qeybta labaad waxaanan doonayaa inaan ogaado haddii aad ku yeelan karto meel lagu fuliyo galka iyo dhowr dbf miisaska, si aad uga hesho kombiyuutarro dhowr ah.
Fadlan jawaab sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qaybtii labaad ee casharradan xiisaha lihi ay wali sugayaan, waanan kaaga mahadcelinayaa hore dareenkaaga.
Jawaab Raul Baca
Cashar wanaagsan, waxaan rajaynayaa inaad dhiiri galiso qaybta labaad, ma ii sheegi kartaa kuwa ah aalada kumbuyuutareedka meelaha fog laga hago ee qalabka lagu soo dejiyo oo lagu tijaabiyo.
Waan kugu hambalyeynayaa, iyo qaybtii labaad?
Maqaal xiiso leh, miyaad sii deysay nooca soo socda?
Kujawaab Daniel Bernal
Cashar barasho oo aad u wanaagsan, kaliya hal su’aal ayaa ah qeybta labaad, sidee bay noqon laheyd ama casharkaan ku dhamaaday?
Ku jawaab canshuur
WAAN KA JECLAHAY FIKRADA BARASHADA WAXYAABAHA CUSUB, WAAD MAHADSAN TAHAY DAVID SI AAD UGU QAADISTA AQOONTAADA,
QORAALKA: MAGACA BARASHADA WAXAAN ISKU DAYAA INAAN KU SAMEEYO MAKHTIGEYGA MAGAALADA AH EE DEBIAN AH OO AH SERVER IYO KOOXO KOOXO MACAAMIISHA MADAXA AH, MID KU GUULEYSTA WIN7 IYO KII KALE OO KU GUULEYSADAY8.
Tilmaamahani ma dhammaystirna, adigu ma cayimanaysid tilmaamaha, waxaad uga tagaysaa waxyaabo si aan kala sooc lahayn, haddii aan adiga ahaan lahaa waan ku celin lahaa
Ama waad dhameystiri kartaa oo adiguba waad qori kartaa, waanan ku faraxsanaan doonnaa adiga ayaan kuu soo daabici doonnaa.
derbiga ada dijo
sida loo qaabeeyo server ka mid ah debian 5 si loogu awoodo in meel fog lagu xiro xp
Ku jawaab ada tabia
haye ka waran markaan sameynayo:
root @ pdc: ~ # apt-get rakib dhis muhiim ah libacl1-dev libattr1-dev libblkid-dev \_ libgnutls-dev libreadline-dev python-dev libpam0g-dev \_ python-dnspyth gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev \_ dnsutils libbsd-dev attr krb5-isticmaale docbook-xsl libcups2 ac1
Liisaska xirmooyinka akhriska ... Doono
Dhismaha geed ku tiirsanaanta
Akhrinta macluumaadka gobolka ... Doon
Xirmo xirmo lama huraan ah lama heli karo, laakiin waxaa loo gudbiyaa xirmo kale.
Tani waxay macnaheedu noqon kartaa in xirmada la la'yahay, la tirtiray, ama
waxaa laga heli karaa oo keliya ilo kale
E: Xidhmada xirmada-aasaasiga ah malahan musharrax rakibaya
wax caawimaad ah? mahadsanid
goobaha wax lagu keydiyo lama habeynin
Waan ogahay inaadan faafin doonin faalladayda. Maqaalku aad ayuu u xun yahay, wuxuu dhahayaa iyada oo aan la sheegin sida loo habeeyay kerberos, maaddaama aad ku dalbato shuruudaha. Maxaa loo soo ururiyay Samba? Nooca 4 ayaa hadda la heli karaa. Qalabaynta aad dejisay, Kinit wuxuu ku siinayaa cilad go'an NT_STATUS_DENIED!. Dhammaan kuwa xiiseynaya inay bilaabaan: https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/samba-dc.html
Maskaxda ku hay in aan daabacay maqaalkan 3 sano iyo bar ka hor iyo markii aan sameeyay, Samba 4 kuma jirin meelaha wax lagu kaydiyo sidaan ku sheegay maqaalka, waana taas sababta ay u ahayd in la soo ururiyo, sidaan horeba ugu soo qoray dhamaadka ma aanan awoodin inaan sii wado. Koorso kale oo aan kujiro, waxay mar labaad na barayaan tan (in kastoo wax ka aasaasi ah yihiin) maantana waxaan bilaabay inaan isku dayo inaan mar kale dhajiyo, kaliya mashiin dalwad ah kiiskan, laakiin waxay hadda bilowday inay isiiso dhibaatada aad sheegto oo aan bilaabay inaan weyddiiyo si aan u arko waxa dhacaya tan iyo markii la sheegay qaladku ima uusan siin markaa. A, waana ku mahadsantahay wadaagida xiriirka.
Fargeetooyin: Waa maxay Deegaanka Desktop-ka ee aad ugu badan tahay?